बहराइनका राजकुमारसहितको टोलीले पुरा गर्यो मनास्लु हिमालको आरोहण – Mission Khabar
बहराइनका राजकुमारसहितको टोलीले पुरा गर्यो मनास्लु हिमालको आरोहण
मिसन खबर २९ आश्विन २०७७, बिहीबार १२:३२
काठमाडौं । बहराइनका राजकुमारसहितको टोलीले मनास्लु हिमालको सफल आरोहण गरेको छ । आरोहणको व्यवस्था मिलाएको सेभेन समिट ट्रेक प्रालिका अनुसार बहराइनका राजकुमार मोहमद हमद मोहम्मद अल खलिफासहितको टोलीले बिहीबार बिहान ६ बजेर १० मिनेटमा मनास्लु हिमालको सफलतापूर्वक आरोहण गरेको हो ।
टोलीका कति जना चुचुरोमा पुगे भन्ने विवरण भने आउन बाँकी रहेको बताइएको छ । पर्यटन विभागकी निर्देशक मिरा आचार्यले भने बहराइनको टोलीका १८ जनामध्ये १४ जना आरोही र तीन जना शेर्पा मनास्लुको चुचुरोमा पुगेको जानकारी दिनुभयो । ८ हजार १५६ मिटर उचाइको मनास्लु हिमाल विश्वको आठौं अग्लो र नेपालको सातौं अग्लो हिमाल हो । राजकुमार मोहमद हमदले यसअघि १७ असोजमा रोयल फोर्स टोलीका साथ ६ हजार १ सय १९ मिटर अग्लो लोबुचे हिमाल आरोहण गर्नुभएको थियो । १५ जना बहराइन र ३ जना बेलायतीसहित हिमाल आरोहण गर्न गत भदौ ३१ गते नेपाल आएको बहराइनको टोलीले नेपाल सरकारबाट मनास्लु र लोबुचु हिमाल आरोहणको अनुमति पाएको थियो ।
सेभेन समिट ट्रेक प्रालिले आरोहणको सबै व्यवस्थापन मिलाएको छ । मनास्लु आरोहणमा बिख्यात आरोही एवम् सेभेन समिटका मिङ्मा शेर्पा, टासी शेर्पासहितको टोलीले बहराइनको राजकुमार सहितको आरोहण टोलीलाई साथ दिएको थियो । बहराइनका राजकुमारसहितको यो टोली आगामी बसन्त ऋतुमा सगरमाथा आरोहणको पूर्व तयारीमा रहेको समेत सेभेन समिट ट्रेकले जानकारी दिएको छ । Photo : Seven Summit Treks fb page
HICAST कलेज र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको चरम मनोमानी, विद्यार्थीमाथी यस्तो खेलवाड
डण्डीमा ठूला व्यवसायीको सिण्डिकेट, मन्त्रीलाई कमिसन बुझाएर राजस्व छुट !
चाडपर्वमा महंगीको मार, कसरी गर्ने आम उपभोक्ताले किनमेल ?
पुरा भयो संखुवासभा हत्या प्रकरणको अनुसन्धान, ५ जनाको संलग्नतामा सामूहिक…
प्रतिपक्षको नाराबाजीका बीच बजेट पारित, हट्ला त बजेट होलीडे ?
जनताको परिक्षामा सधै असफल शिर्ष नेता, देखिदैन सुध्रिने छाँटकाँट
१HICAST कलेज र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको चरम मनोमानी, विद्यार्थीमाथी यस्तो खेलवाड
२डण्डीमा ठूला व्यवसायीको सिण्डिकेट, मन्त्रीलाई कमिसन बुझाएर राजस्व छुट !
३चाडपर्वमा महंगीको मार, कसरी गर्ने आम उपभोक्ताले किनमेल ?
४पुरा भयो संखुवासभा हत्या प्रकरणको अनुसन्धान, ५ जनाको संलग्नतामा सामूहिक हत्या !
५प्रतिपक्षको नाराबाजीका बीच बजेट पारित, हट्ला त बजेट होलीडे ?